Pest Control Ho amidy sy manofa amin'ny Realtyww Info
Navoakan'i Pest Control Companies London
Ny fifehezana ny peste dia farafahakeliny toy ny taloha amin'ny fambolena, satria mbola nisy hatrany ny filana mihazona ny voly tsy miankina amin'ny peste. Mba hampitomboana ny famokarana sakafo dia mahasoa ny miaro ny zavamaniry amin'ireo mpifaninana zavamaniry, ary koa ny fiompiana amin'ny ahitra mifaninana amin'ny olombelona. Ilay fomba fanao mahazatra dia angamba ny voalohany nampiasaina, satria mora ny manimba ny ahi-dratsy amin'ny fandoroana azy na ny fambolena ao ambaniny, ary ny famonoana ireo biby fiompy mifaninana, toy ny goaika sy ny vorona hafa mihinana voa. Ny teknika toy ny fihodinam-bokatra, ny fambolena mpiara-miasa (fantatra ihany koa amin'ny intercropping na ny mifangaro mifangaro), ary ny fiompiana voafantina amin'ny ozinina miompy amin'ny bibikely dia manana tantara lava. Tany Angletera, taorian'ny fiahiahiana momba ny tombontsoan'ny biby, ny fifehezana ny areti-mifindra sy ny fahasimbana dia mahazo vahana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny psikolojia biby fa tsy ny fandringanana. Ohatra, miaraka amin'ny amboara mena an-tanàn-dehibe izay fihetsiky ny teritery ampiasaina amin'ny biby, matetika miaraka amin'ny mpamono simika tsy manimba. Ny any ambanivohitra britanika any Grande-Bretagne dia fahita matetika ny fampiasana basy. Ny Airguns dia malaza indrindra amin'ny fifehezana ireo peste kely toy ny voalavo, bitro ary baomba fotsy volo, satria noho ny heriny ambany dia afaka ampiasaina any amin'ny faritra somary fetra kokoa toy ny zaridaina izy ireo, izay tsy mampidi-doza ny fampiasana basy.